Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » | » Inqwelomoya entsha iSan Jose isiya ePalm Springs
| • Airlines • isikhululo • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho!
Inqwelomoya entsha ye-Alaska Airlines esuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMieta San José (SJC) kunye neSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sasePalm Springs (PSP) siqale namhlanje.
Iinqwelomoya zemihla ngemihla zeAlaska Airlines zisuka eMineta San José ngo-8:10 am, zifike ePalm Springs ngaphambi nje kwe-9:30 am, yonke imihla. Kwabo basePalm Springs, inqwelomoya yemihla ngemihla eya eSan José ihamba ngo-10:10 am
“Inkonzo engayekiyo ePalm Springs ibiyeyona ndlela ifunwa kakhulu kwiminyaka eliqela,” utshilo UJohn Aitken, uMlawuli we-SJC we-Aviation. "Olu nxibelelwano phakathi kweSilicon Valley kunye neCoachella Valley luphawu olumnandi kakhulu lokuchacha, kwaye yomibini le mimandla iya kuxhamla kwinkonzo yemihla ngemihla."
“Ukukhusela inkonzo engayekiyo eSan José ibe yeyona nto iphambili kwisikhululo seenqwelomoya sasePalm Springs,” utshilo Ulises Aguirre, uMlawuli oyiNtloko wezoPhapho kwiSixeko sasePalm Springs. "ISan José, kunye nayo yonke iBay Area, yindawo ephezulu yokusingwa yabahlali kunye namashishini kwiCoachella Valley kwaye sibulela iAlaska ngokudibanisa iPSP neSJC."
Indiza yemizuzu engama-80 isebenza kwinqwelomoya ye-Embraer 175, enezihlalo ezingama-76; I-12 kushishino kunye ne-64 kuqoqosho.
Ukuphehlelelwa kwale nkonzo kuqalisa ixesha leholide yoMbulelo exakekileyo, eqala namhlanje, uMineta San José International elindele abahambi abangama-400,000 kwimpelaveki ezayo. I-SJC ibonelela ngoku kulandelayo ukunceda abahambi bakhuphe uxinzelelo kwiSikhululo seenqwelomoya ngeli xesha leholide:
Ubhukisho olutsha lokuPaka kwi-Intanethi luyafumaneka ku-flysanjose.com/parking
Indawo yokuSondeza yaBantwana eNtsha kufutshane neSango lama-25
Indawo yokutyela kaVick yoMrhwebi omtsha kwiSitenali B
Live Guitarists baHamba kwizikhululo nge-11/25
Abameli beSikhululo seeNqwelo-moya kwiZikhululo ukubonelela ngoncedo lwabahambi
“ILounge e-SJC” ivuliwe
Inkqubo yeLanyard kajongilanga (yabahambi w ukukhubazeka okufihliweyo)
Abo bahambayo ngeli xesha leeholide bayakhunjuzwa ukuba banxibe isigqubuthelo sobuso kwiSikhululo seenqwelo-moya nakwinqwelo-moya. I-SJC icebisa ukuba ufike ubuncinane kwiiyure ezimbini ngaphambi kwexesha lokuhamba ngenqwelomoya ukuze uvumele indawo yokupaka, itikiti, kunye nokuhlolwa, kunye nokujonga kwiinkampani zeenqwelo moya kulo naluphi na utshintsho lwenqwelomoya. Abahambi abasuka kwi-SJC banokucwangcisa kwangaphambili kwaye bonge imali ngokubhukisha indawo yokupaka kwisikhululo seenqwelomoya kwi-Intanethi. Ukugcinela indawo yokuPaka kwiSikhululo seenqwelomoya kwaye ubone ukufumaneka kwendawo yokupaka ngexesha lokwenyani, tyelela flysanjose.com/parking.
SJC: Ukuguqula Indlela iSilicon Valley ehamba ngayo
Isikhululo seenqwelomoya saseMineta San José (SJC) sisikhululo seenqwelomoya saseSilicon Valley, ishishini elizixhasayo eliphethwe siSixeko saseSan Jose. Isikhululo seenqwelomoya, ngoku esikunyaka waso wama-71, sisebenze abakhweli abamalunga nezigidi ezili-15.7 ngo-2019, ngenkonzo engayekiyo kulo lonke elaseMntla Melika naseYurophu naseAsia. Ngolwazi oluthe vetshe kwisikhululo seenqwelomoya, ndwendwela https://www.flysanjose.com.